UNitika Sonkhiya Ukhuluma Ngohambo Lwakhe Olwalulandela Ukusetha I-MyONEarth - Abaphumelele
UNitika Sonkhiya Ukhuluma Ngohambo Lwakhe Olwalulandela Ukusetha I-MyONEarth
Nitika Sonkhiya Talks About Her Journey That Followed Setting Up Myonearth
Ngenkathi umhlaba uthunyelwa ngothuli kusukela ezinyangeni zokuqala zika-2020, empeleni kwaba yisikhathi esihle sokufukamela imibono emisha yebhizinisi, ukuqala, nezinhlelo eziningi ze-'Make in India 'ezaveza amabhizinisi amancane. Amabhizinisi amancane ngokuqinisekile achuma, njengoba kwenza neplanethi. Ukhiye womhlaba wonke ube nemiphumela emihle esimweni sezulu nesimo sezulu. Izulu beliluhlaza okwesibhakabhaka, umoya uhlanzekile, imigwaqo icacile, futhi ubungezwa izinyoni zitshiyoza futhi uzibone ziphumela obala zizobungaza inkululeko edlulwe isikhathi. Emzameni wokubuyisela okwengeziwe emphakathini nakwezemvelo, uNitika Sonkhiya waqala inkampani ezimeme, iMyonearth, eyayinakekela okokuqala imfashini yasekhaya nokunakekelwa komuntu yafika kamuva ngemuva kokubona ukuthi umkhakha wokunakekelwa kwesikhumba ophilayo nohlanzekile wawusuvele wenzelwe ukufa. “IMONEONEarth ingumphumela wocwaningo oluningi engilwenzile emkhakheni wokusimama eminyakeni emine edlule. Ngigxile enanini elikhulu lepulasitiki yokusebenzisa eyodwa esinayo ezimpilweni zethu, futhi nginqume ukwenza okuthile ngakho. Ngisebenzise ibhulashi lamazinyo lokuqala loqalo eminyakeni emihlanu eyedlule, futhi, kusukela lapho, sengifake izinguquko ezimbalwa empilweni yami yansuku zonke ezinomthelela omkhulu, ”kusho uSonkhiya, owasungula iMyonearth ngemuva kokubona ukuthi akukho okuningi okwenziwayo kulo mkhakha ezweni lonke, nokuthi bekuyisikhathi esifanele sokugxumela ensimini.
Uhambo oluya ekupheleni komkhiqizo wamaphupho akho alukaze lube lula uSonkhiya, futhi, wakuthola lokho ikakhulukazi lapho kwakudingeka ukuthi ashiye umsebenzi wakhe owawukhokhela kakhulu. “Ubaba wayengisekela, kodwa umama wayekhathazekile. Wayecabanga ukuthi akekho umuntu ozongishada ngoba anginawo umsebenzi. Ngabona ukuthi ukuba yintombazane kwenza uhambo lokuzibandakanya kwezamabhizinisi, oluselunzima, futhi lube nzima nakakhulu. ” Ngaphambili ngokomsebenzi, wabhekana nezingqinamba eziphathelene nobulili bakhe, kanye nalezo ezavela ngenxa yokuthi imboni yayibuswa kakhulu ngabesilisa. “Ngihlangane nabathengisi ezindaweni ezingamukeleki kahle kubantu besifazane empeleni, bengingakwazi ukubona umuntu wesifazane amamayela. Abanye abathengisi bebengakhululekile ukukhuluma nami ngoba ngingowesifazane, futhi futhi ngoba angibukeki iminyaka yami. Ngabona ukuthi lesi sikhala kanye nomkhakha, wawusaphethwe kakhulu ngabesilisa, ”kusho uSonkhiya. Kodwa-ke, wehla esikhaleni ngamathiphu athile avela kuyise wamkhuthaza ukuba ahlale ethembekile kuwo wonke umsebenzi wakhe.
Isikhungo Samalungelo Abantu Nenhlalakahle Yomphakathi, eJaipur
Lapho wenza i-biz eco-friendly, ukugxila nokubhekisisa kakhulu ukuthi izinto zokusetshenziswa zaba khona kanjani kanye nokusebenza okufanayo. NgeMyonearth, uSonkhiya uqinisekisa ukuthi wonke ama-bamboo atholakala ezigodini zaseChhattisgarh naseMadhya Pradesh, kanye namakhukhunathi aseningizimu yeNdiya. “Siqasha izingcweti zasemakhaya emthonjeni wezinto zethu ezingavuthiwe futhi imikhiqizo yethu siyenza ngabo. Sizama konke okusemandleni ethu ukuqinisekisa ukuthi bonke laba benzi bezandla, kubandakanya nabesifazane basemakhaya, bakhokhelwa inani elifanele nokuthi indawo abasebenza kuyo ifanele futhi iphephile. Futhi, siqinisekisa ukuthi basebenza amahora angeqi kwayisishiyagalombili ngosuku, ”kwengeza uSonkhiya.
Zonke izinkampani ngemuva kwephuzu kudingeka ukuthi zizibandakanye nezibopho zomphakathi ezihlangene. Manje njengoba inkampani yakhelwe kuphela ukusimama, elinye lamabhokisi selikhethiwe. Ngokwengeziwe, uSonkhiya uqinisekisa ukuthi usebenzisana nezinhlangano ezizimele ukuhlinzeka imisebenzi emiphakathini yasemakhaya. Ukholelwa ukuthi izinkampani yonke indawo manje sezibhekelela ezenhlalo futhi uthola ukuthi kubaluleke kakhulu ukubuyisela emphakathini ukuze uphile, ukhule futhi wakhe ibhizinisi nokuthakazelela okuhle emphakathini – ndawonye. USonkhiya uyayiphula futhi le ndaba: “Kunengqondo ngoba izinto eziningi zokwenziwa kwamabhizinisi zenziwa ezindaweni eziqhelelene kakhulu, lapho abantu basebenza kanzima kakhulu ukuqinisekisa ukuthi zikhona. Uma abantu abakulesi siphetho sokunikezwa kwempahla banganakekelwa, khona-ke i-supply chain ngeke iqhubeke. Kithina, ngokwesibonelo, okunye kwezici ezihlukile zemikhiqizo yethu eminingi ukuthi zenziwe ngezandla, ngaleyo ndlela kuqinisekiswe ukuthintwa komuntu ngamunye kwiyunithi ngayinye ethengiswayo. Othile ndawana thile, hhayi umshini, wenze lokhu okuphethe ezandleni zakho. Lokhu kwehluka kungasekelwa kuphela uma ophathina bethu emadolobhaneni, izingcweti, bejabule. ” IMyonearth inikezela ngomsebenzi kubantu besifazane –abondla imindeni yabo – abathintwe yi-COVID-19. 'Uma ngibona benikwa amandla, ngizwa ngathi akukho lapho sibashiya khona,' kusho yena. 'Kungenxa yezifiso ezinhle zalaba besifazane nezingcweti zendawo ukuthi siyakhula, futhi ukubasekela kuzohlala kubalulekile kithi.'
Ungena onyakeni omusha, uSonkhiya unethemba futhi unethemba. Njengoba ebhalisile e-US nase-UK, ubheke phambili ekukhuliseni ibhizinisi lakhe futhi ngasikhathi sinye anikeze imiphakathi yasemakhaya nabesifazane ipulatifomu ebanzi kakhulu yokubanikeza amandla nokusiza ukuthi bakhule bathole isikhala sabo.
Unyaka wokugcina kube wukugeza, kanti uNyaka Omusha uthembisa ukugcwala iziQalo ezintsha. Futhi yilokho esifuna ukukugubha ngokukhishwa kokuqala konyaka omusha, kanye neminyaka eyishumi entsha. Sinezintombazane zekhava u-Deepika Padukone onikeza ukuqonda ukuthi usebenzelana kanjani nezikhathi eziphakeme nezimpilo nokunye okuningi. Siphinde sibe nemikhuba emisha yemfashini, ubuhle nokuningi kushicilelo lwakamuva lwe- Owesifazane India.
kanjani ukuyeka izinwele kuwa owesilisa
ukuvimbela ukulahleka kwezinwele owesilisa ngokwemvelo
ukuzivocavoca ngamanoni esisu ekhaya
ongakwenzi nokungafanele ukwenze ezindizeni zasekhaya india
izindlela zemvelo zokubuyela emuva kwezinwele
amakhambi asekhaya okukhula kahle kwezinwele